Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Oo Jartay Adeega Moblie Internet – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa maanta oo khamiis ah hawada ka saartay adeega Mobile Internet ee ay bixin jirtay, kadib culeys uga yimid dhinaca xarkada Alshabaab oo horay usoo saartay amar lagu joojinayo adeegaas.
Adeega Internet-ka ee laga isticmaalo Mobile-ka ayaa hawada laga waayey wax ka hor salaadda duhur ee xilliga Muqdiuhso.
Sarkaal ka tirsan qeybta Suuq qeynta Shirkadda Hormuud oo magaciisa qariyey ayaaa u sheegay Mareeg.com in shirkaddu hawada ka saartay adeega Mobile Internet kadib markii cadaadis xoogan uga yimid Alshabaab oo adeegsaas mamnuucay.
Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud ayaa horay u jartay adeega Mobile Internet ee deegaanada Alshabaab maamulkaan hase ahaatee waxey maanta sidoo kale adeegsaas ka jartay deegaanada dowladda Soomaaliya ka taliso.
Hormuud ayaa markii hore ka dhega adeygtay amarka Alshabaab ee ahaa in adeegaas laga jaro dalka oo dhan, taasoo keentay in Alshabaab gebi ahaanba xiraan xarumaha shirkaddu ku leedahay inta badan magaalooyinka Koonfurta Soomaaliya.
Alshabaab ayaa ku sheegay sababta ay ku mamnuuceen Mobile Internet inuu akhlaaq xumo wado, islamarkaana iyaga lagu basaaso, waxaana amarkaas horay u qaatay Shirkadda SOMTEL.